काठमाडौं । वरिष्ठहरूलाई पन्छाउँदै आर्थिक चलखेलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बनेका शिवराम श्रेष्ठ अन्ततः आफ्नै गलत कार्यले गर्दा निलम्बित भएका छन् । करिब आधा दर्जनभन्दा बढी आरोप झेलेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि तीन दिनअघि बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए । राष्ट्र बैंकका वरिष्ठहरूलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठ तहका श्रेष्ठले डेपुटी गभर्नर जिप्ट्याएका थिए । उनले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेर सो पद हत्याएको चर्चा तत्कालीन समयमा नै चलेको थियो । पछिल्ला समयमा भने उनी विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदै आएका थिए ।
डेपुटी गभर्नरले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउँदै आएको थियो । अर्थले राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमै श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न दबाब दिएपछि सोमबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनमाथि छानबिन गर्न सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । एक महिनाको समयावधि दिइएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले स्पष्टीकरणको मौका पाउने भए पनि सरकार भने आरोपित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई पदमा राख्ने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ । उनी २०७२ फागुन १९ मा नियुक्त भएका थिए ।
निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि गम्भीर आरोपहरू लागेको छ । उनले आफ्नो पदीय मर्यादाअनुकूल काम नगरेको, वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बदनियत राखेको, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको, वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा कानुनबमोजिम पाउने सुविधाभन्दा बढी फर्जी कागजात पेस गरेर राष्ट्र बंैकलाई नोक्सानी पु¥याएको जस्तो आरोप उनीमाथि लागेको छ । पदीय मर्यादालाई भुलेर श्रेष्ठले एनसेललाई लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको रिटमा सहयोग गरेको, रकम फुकुवा प्रकरणमा व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खराब कर्जा लुकाउने कार्यमा सघाउ पु¥याएकोजस्तो आरोप लागेको छ ।
करिब डेढ वर्ष अवधि बाँकी रहेकै बेला श्रेष्ठको बहिर्गमन हुने निश्चित भएसँगै राष्ट्र बैंकले एकैसाथ नयाँ गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पाउने भएको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको पदावधि आगामी चैतमा सकिँदै छ । नेपालको पदावधि सकिने तीन÷चार महिना बाँकी छँदा गभर्नर बन्न इच्छुकहरूले सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष तहका नेतासँग लबिङ थालिसकेका छन् ।